Traamp Kora Tokkummaa Mootummootaa Irratti Waa’ee Iraan Jechoota Cimaan Dubbatan
Fulbaana 24, 2019
Waa’ee dinagdee addunyoomsuu fi walitti dhufeenya biyyootaa ka mormaa turan - Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis – Doonaald Traamp, akka hoogganaa biyya Gumii Waliigalaa Tokkummaa Mootummootaa keessumsiisaa jirtuutti, gumii sana irratti argamuu fi haasawa gochuuf waan itti gaafatamni irra jiruuf, marsaa sadaffaaf har’a haasawa dhageessisanii jiran.
“Yoo bilisummaa barbaadde, biyya keetti booni. Yoo dimookiraasii barbaadde, mirga abbaa-biyyummaa kee tikfadhu. Yoo nagaa barbaadde, biyya kee jaalladhu,” jedhan – Traamp haasawa isaanii har’aa keessatti.
Waa’ee Iraan immoo jecha cimaadhaan dubbatan – Prezidaantichi Yunaayitid Isteetis. Biyyoonni Addunyaa biyya Ripbublikii Islaamummaa kanatti dhiibbaa gochuuf itti gaafatamummaa akka qabanillee hubachiisan. “Dheebuu dhiiga dhangalaasuu Iraan qabdu, mootummaan itti gaafatamummaan itti dhaga’amu tokkollee deggeruu hin qabu,” jedhan.